केशव स्थापितको विषयमा महिला अधिकारकर्मीहरु विभाजित — Imandarmedia.com
केशव स्थापितको विषयमा महिला अधिकारकर्मीहरु विभाजित
काठमाडौं। नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख मेयर पदका उम्मेदवार केशव स्थापितको विषयमा महिला अधिकारकर्मीहरु विभाजित भएका छन्।
महिला पत्रकारहरूको सञ्जाल सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले केशव स्थापितमाथि लागेको यौन दुव्र्यवहारको आरोपलाई चुनावी फण्डामात्र भएको बताएकी छिन्। शर्माले आरोप लगाउनु भन्दा कानुनी उपचारमा जानु पर्ने सुझाव दिएकी छिन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ‘यसलाई चुनावी फण्डामात्र नबनाऔं। कानुनी उपचारमा गएको भए यति बेला सम्म फैसला पनि भइसक्थ्यो। दोषीले कानुनी रूपमा सजाय पनि भोगी सकेका हुन्थे।
तर अझ पनि ढिला भएको छैन। कानुनी प्रक्रियामा जाऊँ। हामी साथमा नै छौँ तर यसलाई चुनावी एजेण्डा मात्र नबनाऊ। चुनावमा अनेक फण्डा निकालेर एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवार माथि आरोप प्रत्यारोप गर्नु पनि आचार संहिता विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
साथै जस्तो सुकै आरोप लगाए पनि धैर्यतासाथ जवाफ दिन उनले सुझाएकी छन्। आरोप लगाए पछि दोषी भए कारबाही भोग्न तयार हुन्छु भन्न सक्नु पर्छ। कसैलाई अपमानित हुने शब्द बोल्न भएन आवेगमा आएर उम्मेदवारले होस या प्रश्न कर्ताले, शर्माले भनेकी छिन्।
प्रश्नकर्ता महिला माथि केशव स्थापितले बोलेका शब्दमा मेरो पनि आपत्ति छ। उहाँले माफी माग्नु पर्छ। शर्माले अगाडि भनिन् तर यस्ता चुनावी बहसमा आरोप माथि भन्दा पनि उम्मेदवारलाई उसका प्रतिबद्धता सोधिन्छ, बहसमा विषयगत प्रश्न नै सोधिन्छ।
यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जाओस् ।आचारसंहिताको पालना उम्मेदवारले पनि गरौँ, सबैले गरौँ ! शर्मा गतवर्ष भएको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय निर्वाचनमा प्रेस चौतारी नेपालको तर्फबाट अध्यक्षको प्रत्यासी रहेकी थिइन्।
तर उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्य महिला अधिकारकर्मी तथा महिला सञ्चारकमीहरुले भने असहमति जनाएका छन्।शर्माको उक्त भनाइलाई खण्डन गर्दै अर्का सञ्चारकर्मी मञ्जिमा ढकालले पुरुष मित्रहरुले महिललाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
उनले भनेकी छिन् ‘पुरुष मित्रहरू महिलालाई सम्मानजनक व्यबहार गरौं । तपाईंले महिलामाथि कुनै समयमा गरेका नराम्रो व्यबहारले जुनै बेला पनि जिन्दगीमा दुख दिन सक्छ, स्थापितलाई जस्तो !’
शर्माको सो भनाइप्रति सहमति जनाउँदै अर्का सञ्चारकर्मी अमृता लम्सालले शर्माको उक्त कुराले दुख लागेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
‘तपाईंको स्टाटस पढेर साह्रै नै दुःख लाग्यो। तपाईं त सञ्चारिकाको दुई टर्म अध्यक्ष भएको व्यक्ति,समकोण कार्यक्रम चलाएर महिलाहरूको पीडा बुझेको व्यक्ति!
म व्यक्तिगत रुपमा तपाईंलाई सम्मान गर्छु। तर, यो स्टाटस पचाउनै सकिन। तपाईंकै पहलमा यति गरियोस् न त निर्मला शर्माजी ! लम्सालले भनेकी छिन्। बिहीवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा केशव स्थापितलाई यौन दुव्र्यवहार आरोपबारे प्रश्न सोध्दा स्पपित जंगिएका थिए।